अब्राहम लिंकनको विनम्रता | NepalDut
अब्राहम लिंकनको विनम्रता
लोकतन्त्रका महान् व्याख्याता अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनिसकेपछि एकपटक आफू जन्मेको गाउँनजिकैको अर्को एउटा गाउँमा एक जनसभालाई सम्बोधन गरिरहेका थिए ।
उनको सम्बोधनको बीचमा एक महिला उनको नजिकै पुगिन् । लिंकनलाई देखेर उनी अचम्ममा परिन् । आश्चर्यपूर्वक उनले भनिन्– अरे १ राष्ट्रपति यिनै हुन् रु यिनी त हाम्रै गाउँका एक मोचीका छोरा होइनन् र ?
आफूबारे गरिएको टिप्पणी लिंकनले पनि सुने । सुनेर मुस्कुराउँदै बडो विनम्रतासाथ उनले ती महिलासित प्रश्न गरे– म्याडम, तपाईंले यहाँ उपस्थित जनतासामु मेरो वास्तविकता बताएर निकै राम्रो काम गर्नुभयो । साँच्चै तपाईंले भनेजस्तै म तपाईंको गाउँका मोचीकै छोरा हुँ । के म तपाईंसित एउटा प्रश्न गर्न सक्छु ?
महिलाले भनिन्– निःसंकोच सोध्न सक्नुहुन्छ । अनुमति पाएपछि लिंकनले सोधे– के मेरा पिताले तपाईंका जुत्ता ठीक ढंगले मर्मत गर्नुभएको त थियो ? तपाईंलाई उहाँसित कुनै गुनासो त थिएन नि ? महिलाले सफाइ दिँदै भनिन्– हैन हैन, उहाँको काममा कहिल्यै कुनै गुनासो थिएन । उहाँ आफ्नो काम निकै राम्रोसँग गर्नुहुन्थ्यो ।
तब अब्राहम लिंकनले भने– म्याडम, जसरी मेरा पिताले आफ्नो काममा कुनै गुनासो गर्ने मौका तपाईंहरूलाई दिनुभएन, त्यसैगरी म पनि तपाईंहरूलाई कुनै गुनासो गर्ने मौका दिनेछैन । तपाईंहरूले मलाई राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्ने अभिभारा दिनुभएको छ । म कुनै गुनासो गर्ने मौका नदिई त्यसलाई पूरा गर्नेछु ।